Ny sidina British Airways avy any London Heathrow mankany Saint Lucia dia niverina taorian'ny 30 taona mahery
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina British Airways avy any London Heathrow mankany Saint Lucia dia niverina taorian'ny 30 taona mahery
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny sidina British Airways avy any London Heathrow dia miverina any Saint Lucia afaka 30 taona mahery
UK matetika no tsena fizahantany faharoa any Saint Lucia.
TUI dia manome serivisy isan-kerinandro any Saint Lucia avy any London's Gatwick.
British Airways dia manana sidina efatra isan-kerinandro avy any London's Gatwick mankany Saint Lucia.
Ny serivisy British Airways avy any Heathrow dia hifarana amin'ny 4 septambra 2021.
Nanampy vavahady iray hafa mankany amin'ny toerana misy azy i Saint Lucia miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny serivisy miaraka amin'i British Airways avy any London Heathrow (LHR) taorian'ny 30 taona mahery. Ny Boeing 777 dia nilatsaka tamin'ny sabotsy 24 jolay 2021, tokony ho tamin'ny 5:45 hariva ary nahatratra 173 ny totaliny ary mpitsidika ny ankamaroany.
Avy any Gatwick (LGW), Saint Lucia dia efa mandray serivisy isan-kerinandro miaraka amin'ny TUI sy sidina 4 isan-kerinandro amin'ny British Airways. UK matetika no tsena fizahan-tany faharoa lehibe indrindra an'i Saint Lucia ary hatreto, ny fitomboan'ny 4% isan-taona.
Mpiasa an-tsambo 13 notarihin'ny Kapiteny -Peter Williams no niditra tao amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) mba handray takelaka fahatsiarovana izay mampiseho ireo kambana roa, tsena manokana, ary fonosana tongasoa tsy nampoizina. Mpandeha roa tsara vintana koa no notolorana fanomezana rehefa tonga.
“Ity serivisy vao natomboka isan-kerinandro ity Heathrow tonga amin'ny fotoana mahamety izany rehefa i Saint Lucia dia manohana bebe kokoa ny fahavaratra efa mahavariana, sy ny vanim-potoana ririnina ho avy. Io dia famantarana ihany koa ny fitohizan'ny fivoarana mankany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahantany, "hoy ny talen'ny fifandraisana Public- Geraine Georges.
Ny serivisy British Airways avy any Heathrow dia hifarana amin'ny 4 septambra 2021, ary efa mitohy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ato ho ato. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka koa dia kasaina hampitombo ny fiaramanidina mandritra ny ririnina miaraka amin'ny sidina isan'andro manomboka amin'ny volana Novambra amin'ny Gatwick (LGW).